लेखापालद्वारा आठराई गाउँपालिका अध्यक्षमाथि मुक्का प्रहार - dautarimedia.com
लेखापालद्वारा आठराई गाउँपालिका अध्यक्षमाथि मुक्का प्रहार
काठमाडौं । तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर लिम्बूमाथि अध्यक्षमाथि मुक्का प्रहार भएको छ । आइतबार दिउसो गाउँपालिकाबाट भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका रकम निकासी गर्न आग्रह गर्दा लेखापाल सुजन थापाले अध्यक्षमाथि मुक्का प्रहार भएको हो ।
आठराई गाउँपालिकाका कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा कार्यलयमै हानाहान परेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अध्यक्ष र लेखापाल थापाबीच भनाभन हुँदैगर्दा हात हालाहाल भएको हो । भनाभन गर्दै गर्दा लेखापालको नजिकै पुग्नु भएको बेला अध्यक्षमाथि मुक्का प्रहार भयो । तर अर्का कर्मचारीले छेकेकोले उहाँलाई लागेन।’
कोरोना सक्रमण सँगै स्वास्थ्य समस्यामा रहनु भएको अध्यक्ष लामो समयपछि पछिल्लो समय कार्यालयमा एकसाता अघिबाट मात्रै उपस्थित हुनु भएको बुझिएको छ ।
उपस्थित हुँदा गत वर्षका १५८ शिर्षकका रकम समेत निकासा नभएको अवस्थामा खाता रोकीएको अवस्थामा रहेको बुझिएको छ । उक्त शिर्षक योजनाका लागि सम्पूर्ण प्रकृया पुगेपनि लेखा साखामा आएर रोकीएको एक अधिकारीले बताउनु भयो ।
सोही विषयमा बुझ्दा उहाँहरुबीच हात हालाहाल भएको बुझिएको छ ।
सबै प्रकृया पूरा गरेर पनि रकम किन निकासी नगरेको भनेर प्रश्न गर्दा मैले के गर्न सक्छु ? भन्दै मुख लागेपछि हात हालाहालको स्थिती आयो’ – अर्का एक कर्मचारीले बताउनु भयो ।
गाउँपालिकाले रकम निकासी नगर्दा कोरोना महामारीमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्य कर्मीहरुलाई दिइने जोखिम भत्ता समेत अझै निकासा हुन नसकेको बताइएको छ ।
सबै योजना तथा भत्ता वापतको रकम निकासीका लागि हुनुपर्ने प्रकृया पूरा हुँदा पनि लेखा शाखाबाटै रकम निकासी नहुने गरेको अन्य कर्मचारीहरुको पनि गुनसो छ ।
अर्का एक कर्मचारीले भने, ‘उहाँ सुजन थापा आएपछि गाउँपालिकाका हामी सबै कर्मचारीले समयमा तलव पाएका छैनौँ।’
उहाँले सबै योजनाका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीयबाट तोक लाग्दा पनि रकम निकासा नगरेको बताउनु भयो ।
उता अध्यक्ष लिम्बूले भने रकम निकासी किन रोकियो ? छरितो गर्नुहोस भन्दा आफूमाथि हातपात गरेको बताउनुभायो । आफूमाथि हातपात भएपछि आफूले पनि आवेगमा आएर हात फर्काको बताउनु भयो । लेखापाल थापाले दलाली गर्नका लागि यी सबै हर्कतहरु गरेको अध्यक्ष लिम्बूले बताए ।
योजनाको रकम तथा अन्य निकासी दिएवापत रकम लिनका लागि निकासी रोकेर राखिएको अध्यक्षले बताउनुभयो । उता लेखापाल थापालाई सम्प
Previous: कालीकोटमा जारी निषेधाज्ञा भदौ १ गतेसम्म लम्बियो
Next: विद्यार्थीले पाएनन् इसईईको नतिजा